08 | April | 2008 | Save Burma
စစ်အစိုးရအာဏာတည်မြဲရေး ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် NLD သုံးသပ်
အခု စစ်အစိုးရ ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းဟာ လူတစ်ဦး ပါတီတဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု အကျိုးအတွက် ရေးဆွဲတာ မဟုတ်ဘူးလို့ နိုင်ငံကျော် ၀န်ကြီးချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က မနေ့က ပြောကြား လိုက်ပေမယ့် နိုင်ငံရေး လေ့လာဆန်းစစ်သူတွေနဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ ဒါဟာ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် တစု အကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်းအရ တပ်မတော်က အရေးပါတဲ့ အာဏာတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားတာမို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတွက် အာမခံချက်ရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ လမ်းမမြင်ဘူးလို့ လည်း ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးပါမယ်။
မနေ့က နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်က ဘားအံမှာရောက်နေတုန်း ပြည်သူအားလုံး လိုလား တောင့်တ နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်အသွင် ကူးပြောင်းဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က မူကြမ်းကို ပါတီတဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု အကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ ရှင်းပြခဲ့ပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်အားလုံးကို တပ်မတော်ကနေ ဆောင်ရွက်ဖို့ ရေးဆွဲထားတာကို တွေ့ရတာမို့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေမူကြမ်းဟာ တပ်မတော်အဖွဲ့အတွက် အဓိက ရေးဆွဲထားတာဖြစ်နေတယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ အခြေခံအားဖြင့်တွေ့ရှိရတာမို့ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များက နိုင်ငံတော် အာဏာကို ဆက်လက်ကိုင်ဆွဲသွားမယ်။ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့အတွက် ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေလို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ အရေးကြီးတဲ့ ရာထူးတာဝန်တွေ အားလုံးကို တပ်မတော်သားတွေကပဲ သူတို့ကိုပဲ ခန့်ရမယ်။ နိုင်ငံခြားရေးတို့၊ ပြည်ထဲရေးတို့ ၊ ကာကွယ်ရေးတို့၊ ဒီလိုရာထူးတွေကို နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် ပင်လျှင် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ စာလုံးရေးထားတာက ရယူရမည်ဆိုတော့ ပေးတဲ့စာရင်းကို ယူရမှာ။ အရေးပေါ်အခြေအနေတို့ အားလုံးသော အရေးကြီးသော အာဏာအားလုံးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးကောင်စီက အဓိက သမ္မတနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ။ ပါလီမန်မှာ ဘာအာဏာမှ မရှိဘူး။ အဲဒါကြောင့် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များက အာဏာအမြဲတမ်းယူမယ့် အခြေခံဥပဒေလို့ ကျွန်တော်ပြောတာပါ။ ”
မေလထဲမှာ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုရေးအတွက် မဲပေးကြရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုထက်ထိ ဥပဒေမူကြမ်းဟာ မဲပေးရမယ့် ပြည်သူတွေ လက်ထဲကို လုံးဝမရောက်သေးပါဘူး။ အကြမ်းအားဖြင့် ပြည်သူတွေ နားလည်ထားတာက ဒီမူကြမ်းအတွက် ပြင်ဆင်မှုတစုံတရာလုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကနေ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ထက်ဝက်ကျော် အများ ဆန္ဒနဲ့ လွှတ်တော်က ၇၅ရာခိုင်နှုန်း အတည်ပြုချက်ပေးမှ ပြင်နိုင်မယ်လို့ နားလည်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာ တိတ်တဆိတ်ထွက်ပြီး ဖြစ်တဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မူကြမ်းအရဆိုရင် မဲပေး ပိုင်ခွင့်ရှိ သူ အားလုံးက အတည်ပြုချက် ပေးမှ ပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုတာ တွေ့ရမယ်လို့ ရိုက်တာ(စ်) သတင်း တပုဒ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD အဖွဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းကို မေးကြည့်တဲ့အခါ
“ကျွန်တော်တို့ တွေ့တာကတော့ ပြဌာန်းဖို့တောင်မလိုဘူး။ ဘယ်တော့မှ ပြင်ခွင့်မရလို့။ ဘယ်လိုမှ ပြင်လို့မရအောင် ရေးထားတဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒမဲပေးပွဲတခုမှာ အားလုံးကဆိုတဲ့ စကားလုံး၊ ဗမာပြည်မှာ ဆန္ဒမဲပေးတဲ့လူ သန်းသုံးဆယ်ရှိရင် သန်းသုံးဆယ်မှာ တယောက်လျော့ နေလို့တော့ မရဘူးလေ။ ဒီစကားလုံးအရ မရဘူးဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ပြင်ခွင့်မရှိဘူး။ အဲတော့ ဘယ်တော့မှ ပြင်ခွင့်မရှိတဲ့ မူကြမ်းကို ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုရေးသလဲဆိုရင် သူတို့ တပ်မတော် ခေါင်း ဆောင်များ နိုင်ငံတော် အာဏာကို ဘယ်တော့မှ လက်မလွတ်ဘူးလို့ ဒီလို အဓိပ္ပါယ်ရနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲက ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူအားလုံးလို့ ပြောထားတဲ့အတွက် ဘယ်တော့ အခါမှ ပြင်လို့ မရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်။”
ဒါ့အပြင် လွှတ်တော်မှာလည်း ၇၅ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အောင်ရဖို့ မလွယ်လှတဲ့အတွက် ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ရေးဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က အခု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းဟာ နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေအတွက် ရေးဆွဲထားတယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်က အရေးပါတဲ့ အာဏာတွေကို ဆုတ်ကိုင် ထားတာမို့ ညီညွတ်ရေးအတွက် အာမခံချက်မရှိဘဲ နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ နားလည်တာ နိုင်ငံတော် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာရှိမှ ခိုင်မြဲမှာ။ အခုလို တပ်မတော်က ဒီလိုယူထားရင် ညီညွတ်ရေးက ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခိုင်မြဲဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအကျိုးစီးပွားလည်း အခု တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ လွှတ်တော်တို့ ဘာတို့လုပ်တယ်။ သို့သော်လည်း အဲဒီမှာ လုပ်တဲ့ ၀န်ကြီးအားလုံးကိုလည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတကပဲ ခန့်မှာ။ သူတို့ဟာ သူတို့ ရွေးချယ်ခွင့်လည်း မရှိဘူး။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဟာ ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ ကျွန်တော်တို့က မမြင်ပါဘူး။”
ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံမူကြမ်းဟာ စစ်အစိုးရ ဆက်လက်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အဓိကထားပြီး ရေးဆွဲထားတာလို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ရှုတ်ချပြစ်တင်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
Tagged with VOA Burmese
The news agency’s Adrees Latif won for “his dramatic photograph of the Japanese videographer, sprawled on the pavement, fatally wounded duringastreet demonstration in Myanmar [Burma],” the Pulitzer Prize board said.
“The images dominated front pages across the US and the world. Mourners at Nagai’s funeral in Japan clutched the picture, which playedarole in the public outrage that prompted Tokyo to scale back aid to the ruling military junta.”
Tagged with Adrees Latif, Buddhist, Burma, Crackdown, Japanese, monk, Myanmar, Nagai Kenji, Protest, Pulitzer, Reuters
World Focus on Burma (8 Apr 08)
IOC may scrap Beijing Olympic torch relay
Times Online, UK – There’sadirect link between US trade policy, the American consumer and human rights violations in China, Tibet and Myanmar (Burma). …
Burma Travel: Jailed for Life for Not SayingaWord
With all the commotion over Tibet these days, the situation in Myanmar seems to have all but faded from the media’s eye. But the case of Burmese activist …
Passenger transport halt hits border trade
Moreh: The sudden suspension of passenger transport services along India’s border highway has servedabody blow to Indo-Burma border trade once again. …
Communist Party of India vows fight on food prices
Communist Party USA, NY –
Many parties from South Asia are here including Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Burma (Myanmar). The Chinese Communist Party sentalarge …
Meanwhile, the military authorities are tightening security and deploying more security guards in Burma’s main cities. The “Vote No” campaign started in …
Reuters photographer recounts capturing Pulitzer-winning photo
Press Gazette, UK –
… for breaking news photography after capturing the moment that Japanese journalist Kenji Nagai was killed during demonstrations in Burma last September. …
Sausalito duo scales Golden Gate Bridge to protest China
Marin Independent-Journal, CA –
A march sponsored by the Buddhist Peace Fellowship to support Myanmar (Burma) is also planned for the Golden Gate Bridge from 10 am to noon Wednesday. …
City readies for protests as Olympic torch nears
Alameda Times-Star, CA –
Others held signs denouncing China’s trade with repressive regimes such as Burma (Myanmar) and its treatment of practitioners of Falun Gong, …
Myanmar earned 2.7 bln dlrs from 2007 gas exports: report
YANGON (AFP) — Military-ruled Myanmar earned 2.7 billion dollars from gas exports in 2007, an 80 percent increase from the previous year,aweekly newspaper …
Action against PKK key to dialogue with Iraqi Kurds, says Babacan
… or officially the Lao People’s Democratic Republic,alandlocked country in Southeast Asia bordered by Burma (Myanmar) and China to the northwest, …
Beloved 7-year-old ‘released’
… arrivals to Utah who have spent years if not decades in refugee camps in Thailand after escaping the military government of Burma, now known as Myanmar. …
When Will the Opposition Deliver?
By ADAM SELENE Which way is Burma heading? Straight toanew confrontation it seems. And when the dust settles, the customary winners: the Burmese army. …
India-Burma relations gaining momentum of its own
Global Politician, NY –
The Indo-Burmese relationship is acquiringapositive momentum of its own despite western rights groups’ criticism of Myanmar ‘s handling of pro-democracy …
… the Japanese videographer, sprawled on the pavement, fatally wounded duringastreet demonstration in Myanmar [Burma],” the Pulitzer Prize board said. …
Burma fuels Thailand
Bangkok Post, 8 April 2008
Natural gas exports to Thailand alone earned the country $2.7 billion, accounting fora2007 trade surplus of $3.1 billion.
In 2007, Burma’s total trade hit an historic peak of $8.7 billion, split into 5.9 billion exports and 2.8 billion in imports, leaving the country withatrade surplus of $3.1 billion, said the Myanmar Times weekly, citing government officials.
Burma’s exports last year were driven primarily by natural gas, which earned the impoverished country $2.7 billion, or 45 per cent of its total exports.
“The major reason why Burma’s trade volume is increasing is the massive contribution form the energy sector – the export of natural gas to Thailand,” said Maung Maung, an economist and researcher from Economic Studies and Research Institute, the Union of Burma Federation of Chambers of Commerce and Industries (UMFCCI).
Natural gas exports have risen dramatically since 2002, when Burma first openedapipeline to deliver gas from offshore reserves in the Gulf of Martaban to Thailand.
“Asaresult, Burma has enjoyed consecutive trade surplus since 2002,” said Burma’s Commerce Minister Brigadier General Tin Naing Thein inarecent interview.
Besides natural gas, Burma’s main export items last year included agricultural products, amounting to $572 million in earnings, gems and jewellery to 561 million, and fishery products to 366 million.
The country’s main imports were fuel, which cost $471 million, followed by textiles at $276 million, palm oil at $251 million, machinery parts at $243 million, and automobiles at $192 million.
Most multilateral lenders such as the World Bank and Asian Development Bank severed their programmes with Burma in 1988 followingabrutal military crackdown onapro-democracy movement that left more than 3,000 people dead.
The US forbade its private sector from investing in the country in the early 1990s, after the ruling junta refused to acknowledge the outcome of the 1990 general election, and the European Union has placed visa restrictions on the regime’s rulers.
US and EU sanctions were tightened after another crackdown on protesters in September, whenasudden doubling of fuel prices prompted demonstrators, led by Buddhist monks, to take to the street on Rangoon.
The latest incident left at least 31 dead, according to the official media. (dpa)
Tagged with Bangkok Post, Burma, Gas, Myanmar, Trade
World Focus on Burma (7 April 08)
Burma’s trade reaches historic peak
… leaving the country withatrade surplus of 3.1 billion, said the Myanmar Times weekly, citing government officials. Burma’s exports last year were …
Olympic Torch Snuffed Out in Paris, First Time in History
Hollywood Today Newsmagazine, CA – … connected to Darfur, as well as Myanmar (Burma) and the Chinese governments routing of Buddhist monks, forcing their leaders into exile. …
Editorial: Mosque plan would add to our diversity
Utica Observer Dispatch, NY – Thousands of Bosnians have been followed by Muslims from places such as Myanmar (Burma), the Sudan, Somalia and Afghanistan. Some of these subsequent groups …
Debut novel, Alcott biography win Pulitzer Prizes
CBC.ca, Canada – … who shot the photo ofafatally wounded Japanese videographer, sprawled on the pavement duringastreet demonstration in Burma, also known as Myanmar. …
Forbidden Travel: No Tibet for You
Jaunted –Says one travel agent: Travelers were very frightened about heading to Burma while the protests and crackdowns were occurring…People who were scheduled to …
Funeral held for Hser Ner Moo
ABC 4, Salt Lake City – … Office says charges likely will be filed Tuesday. Hser and her family moved to Utah last summer as refugees from Myanmar, formerly known as Burma.
Tearful, crowded funeral for Moo
Deseret News, UT – Jon Huntsman Jr. Many of those in attendance were from Myanmar, formerly Burma, and Thailand, most of whom were dressed in traditional wear. …
1200 Activists Descend on NYC to Demand Freedom for Libyan …
Common Dreams (press release), ME – A demonstration at Dag Hammarskjold Plaza will call on Myanmar (Burma) to stop the crackdown on pro-democracy activists, monks, students and others, …
Asian Tribune, Thailand – On the other hand, Opposition leaders are urging the Burmese living inside Burma to decisively cast ‘No’ votes in the forthcoming referendum.
Afghanistan: Vocal ‘Warlord’ Critic Seeks To Reverse Her Expulsion …
Joya’s supporters compare her to Aung Sun Suu Kyi, the symbol of Burma’s democratic movement. But her critics allege that during her trips to the West, …
Anti-government protests continue in Burma
The Thai prime minister reportedly said the two had discussed how ASEAN could playapositive role in working with Myanmar to help it face the challenges it …
Burma and India sign pact for on new Burmese
SteelGuru, India – It is reported that India will buildatransportation and seaport system in Myanmar under an agreement that was signed after talks between Indian officials …
India’s Relations with Myanmar, Bangladesh
Mainstream, India – Burma, or Myanmar as it has been christened recently, remained under the dictatorship of General Ne Win foralong time. Towards the end of the 1980s …
Ignoring International pressure, India prepares foraBurmese port …
The Cheers, Estonia – By Nava Thakuria, Journalist / News reporter gnoring the continued international pressure to boycott the ruling military junta of Burma (Myanmar), …
World Focus on Burma (6 Apr 08)
Carbon credits could help save Amazon, blunt warming: study
AFP – Apr 6, 2008
… from carbon trading schemes may be the least likely to use the money effectively, such as Burma, Bolivia, The Democratic Republic of Congo and Myanmar. …
Entertainment in Brief: 04/06/2008
Traverse City Record Eagle, MI – Apr 6, 2008
The program explores Myanmar, formerly Burma. Tickets are $6 for adults and $4 for students though high school age, available through the Cheboygan Opera …
Arrests mar London’s Olympic torch relay
San Jose Mercury News, USA – Apr 6, 2008
By BRYAN MITCHELL AP Writer Police restrainaFree Burma demonstrator as the 2008 Beijing Olympic torch pass in Whitehall, London, Sunday April, 6, 2008. …
Thai Teen adapts to urban life in US
Daily Review Online, CA – Apr 6, 2008
She recalls last summer’s crackdown on monks and Burmese citizens in Burma, which has officially been called Myanmar since 1989. “I don’t like the Burmese …
Refugee family building new life
The Argus, CA – Apr 6, 2008
Like most of the thousands of Myanmar families settling in the United States, they know they cannot go back to Myanmar, yet can never become citizens in …
Olympic torch arrives as police warn protesters
Reuters South Africa, South Africa – Apr 6, 2008
The event has drawn “substantial” interest from groups who plan to stage protests against China’s human rights record and its role in Myanmar (Burma) and …
Norris teacher pushes for conversion to metric
Sioux City Journal, IA – Apr 6, 2008
Only two other countries have yet to convert to the metric system: Myanmar, formerly known as Burma, in Southeast Asia, and Liberia in western Africa. …